नेपाली महिलाहरु साउने सोमबारमा किन ब्रत बस्छन् ? कारण यस्तो छ…….
July 19, 2020 chothale
काठमान्डौँ । साउन महिनामा भगवान शिवको पूजा गर्दै सोमबार व्रत बस्ने प्रचलन छ । भगवान शिवको अर्को नाम भीम अर्थात सोम पनि हो । शिवको साउन महिनामा घोर अर्थात डरलाग्दो स्वरूप हुन्छ । धर्म तथा संस्कृतिविद्हरुका अनुसार साउन महिना धेरै पानी पर्ने, बाढी पहिरो आएर समाजमा प्राकृतिकरूपमा घटना नहोस् भनेर भगवान शिवको पूजा गरिन्छ । पहिलो पटक व्रत बस्न सुरु गर्नका लागि पाँचवटा सोमबार हुँदा सुरु गरिनु शुभ हुने विश्वास गरिन्छ । सोमबार व्रत बस्दा मनले चिताएको कुरा पुग्ने जनविश्वास रहिआएको छ । सोमबारको व्रत बस्दा अविवाहिताहरूले असल र सुन्दर पति पाउने…
मनोरन्जन, राेचक, समाचारLeaveacomment
भारतलाई थर्काउने नेपालका एकमात्र राजनेता केपी ओली : सहमत हुने ले सक्दो सेयर गरौ ।
काठमान्डौं । नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप रहने तथ्यलाई फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकारेका छन् । आफ्नो चाहना विपरीत हुने नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा भारतको हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । भारतीय चाहना विपरीत संविधान जारी गर्दा भारतले २०७२ मा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । र अहिले नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेट्दै सो भूमिमा बाटो बनाएर उद्घाटन गरे पछि ओली सरकारले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ । ओली सरकारले पनि मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गर्दै जारी गर्ने र संविधान संशोधनसमेत गरेर संविधानको अंग बनाएको छ । यसबाट नेपालसँग भारत…
समाचारकेपी ओली, नेपाल, भारतLeaveacomment
काठमान्डौँ । नेपाली साँगितिक क्षेत्रका चर्चित गायक, तथा सर्जक प्रकाश सपुतको नयाँ गित ‘नमस्कार’ले अहिले सामाजिक संजालदेखि मिडियामा राम्रो प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ । लकडाउनकै बेला सिर्जना गरिएको उक्त गित र भिडियो प्रकाश सपुतका अघिल्ला गितहरु भन्दा केही फरकपन मिसिएको छ । नमस्कारमा जातपात भन्दा माया प्रेमले संसार जितिन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेको उक्त गितको भिडियोमा कविता नेपालीलाई देख्न सकिन्छ । समाजमा धेरै नकारा’त्मक सोचहरु बढ्दै गएको देखेर प्रकाश सपुतले यस गितलाई सकारात्मक सोच बनाउनका लागि सिर्जना गरेकोे प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । जातपात भन्दा माया प्रेमले संसार जितिन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत…
मनोरन्जनप्रकाश सपुतLeaveacomment
काठमाडौं– नेपाल–भारतबीच सीमा समस्याका कारण सम्बन्ध निकै चिसिएको छ । खासगरी भारतले पछिल्लो समय नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरी मानसरोबर जाने बाटो बनाएर उद्घाटन गरेपश्चात सम्बन्धमा तिक्तता आएको हो । यसअघि भारतले नेपालको भूमी समेटेर नक्सा समेत जारी गरेको थियो । त्यो भन्दा अगाडी नाकाबन्दी गरेका कारण नेपालमा मोदी र भारत विरोधी अभियान नै चलेको छ । मोदीको सरकार बनेपछि नेपालसंगको सम्बन्ध सुध्रिने अपेक्षा गरिएपनि सम्बन्ध त्यसको ठिक विपरित बनेको छ । खासमा नेपालमा भारतविरोधी माहोल बनाउन भारतीय मिडिया र केहि नेताहरूनै लागिपरेका छन् । सीमा विवाद बल्झिएपछि वार्तामा बस्न नेपालले…
विदेश, समाचारभारत, मोदी, सिमा बिबादLeaveacomment
नेपालले सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण रोकेपछि भारतले ओली सरकारमाथि लगायो यस्तो गम्भीर आरोप !
काठमाडौं । भारतले नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । भारतले नेपाल चीनको बाटोमा हिड्दै सीमा क्षेत्रमा सडक अन्य विकास निर्माणका कार्यहरुमा अवरोध सिर्जना गर्न थालेको आरोप लगाएको हो । तर नेपालको तर्क के हो भने भारतले दशगजा क्षेत्रमा सडक बनाउने नाममा अग्ला अग्ला बाँध बनाएर नेपालमा डुबानको समस्या निम्ताउने गरेको छ । अर्को तिर भारतले नेपालका कारण भारतको बिहार लगायतका राज्यहरु डुबानमा परेको बताउँदै आएको छ । विगतमा वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष भारतले मनपरी रुपमा दशगजा क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्न पाएको छैन । दशगजाबाहेकका विवादित क्षेत्रहरुमा पनि नेपालले…
समाचारकेपी ओली, नेकपा, भारतLeaveacomment
यो पृथ्वीमा धेरै मानिसहरु बसोबास गर्छन अनी उनीहरुको आ आफ्नो भावना मन अनि तन पनि छ । मानिसहरु सबै भन्दा सर्बश्रेष्ठ प्राणी हुन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । एक बिना अर्कोको जिन्दगीको खासै अर्थ र परिभाषा पनि हुदैन । महिला र पुरुष एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुन् कुनै...
यी युवतीको अनौठो विज्ञापन, ६३ हजार लैजाउ गर्भवती बनाएर जाउ !
हाम्रा वरिपरी हरेक दिन नयाँ र अनौंठा घ’टनाहरु भइरहेका हुन्छन् । हामीले केही घ टनाहरुलाई नजर...